Grammar မှန်မှန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတွေ ရေးနိုင်မယ့် Grammarly Keyboard — Type with confidence – AsiaApps
January 19, 2018 January 19, 2018 MoonReviewsNo Comment on Grammar မှန်မှန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတွေ ရေးနိုင်မယ့် Grammarly Keyboard — Type with confidence
အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားမှာ Grammar မှန်ကန်မှုက အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ grammar တွေက ကိုယ်တကယ်နားလည် သဘောပေါက်ထားပြီးသားတွေ ဖြစ်နေပေမယ့် တကယ်တမ်းရေးတဲ့အချိန်မှာ အမှားတွေပါတတ်ပါတယ်။ ကျယ်ပြန်လှတဲ့ Grammar နယ်ပယ်ကို ကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်စွာတတ်မြောက်နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူသလို့ လက်တွေ့ကျကျ အသုံး ချတတ်ဖို့လည်း ခက်ခဲပါတယ်။
Grammarly Mobile Keyboard Apk က အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတွေရေးရင် မှားလေ့မှားထရှိတဲ့ အမှားတွေကို ပြင်ဆင်ပေးမယ့် checker တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Facebook တို့ Instagram တို့မှာ status တွေတင်ရင် တစ်ခါတစ်ရံ အမှားလေးတွေ တွေ့ရမှာပါ။ အဲ့ဒီအမှားတွေက ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် တကယ့် အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင် သင့်ကို အထင်သေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ email တွေ report တွေ ရေးရင်းလည်း grammar အမှားတွေ ပါလို့ မဖြစ်တဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
အလုပ်လုပ်ရတဲ့လူဆိုရင် ဒီ keyboard လေးက ရှိကိုရှိထားသင့်ပါတယ်။
Grammar တွေအပြင် စာလုံးပေါင်း အမှားတွေကို အလိုအလျောက် စစ်ဆေးပေးနိုင်ပြီး တူညီတဲ့ အဓိပ္ပါယ် တွေကိုလည်းဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ Punctuation တွေဖြစ်တဲ့ full stop (.) ၊ Comma (.) ၊ Colon(: ) ၊ question mark (?) စတဲ့ အသေးစိတ် အမှားအယွင်းလေးတွေကအစ မှန်ကန်တဲ့ နေရာမှာထည့်ဖို့ ကူညီပေးမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ apk တစ်ခု အဖြစ် recommend
ပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ နဲ့ အမှားပါမှာ စိတ်မပူရပဲ ရေးနိုင်ပါပြီ။ နမူနာ video လေးကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Android, iOS နှစ်ခုလုံးနဲ့ free download လုပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ Rating တွေက Play Store မှာ4နဲ့ App Store မှာ 4.7 အသီးသီးရရှိထားပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ App Store မှာ Grammarly Mobile Keyboard ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖြစ်ပြီး Play Store မှာ Grammarly Keyboard — Type with confidence ခေါင်းစဉ်နဲ့တွေ့ရမှာပါ။
Image Source – Grammarly Keyboard — Type with confidence
ပန်းချီကားပုံစံ ဓာတ်ပုံတွေ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် Pixel Art Camera